Misaotra an’ Andriamanitra noho ilay fanomezana tsy azo tononina
"Isaorana anie Andriamanitra noho ilay fanomezany tsy azo tononina." - 2 Kor. 9:15.
Ho loza tokoa ny hanjòny taranak'olombelona amin'ny andro farany, satria ny ankamaroan'ny olona dia efa nanda ilay fanatitra tsy voavidim-bola, - nolaviny ilay fanomezana sarobidy indrindra azon'Andriamanitra natolotra ho an'izao tontolo izao. Avy amin'i Kristy, Ilay fanomezana tsy hay tombanana, ny fitahiana rehetra azontsika. Fiainana, fahasalamana, namana, fahaiza-mandanjalanja, fahasambarana, antsika avokoa izany amin'ny alalan'i Kristy. Enga anie ho tsapan'ny tanora sy ny zokiolona fa ny zavatra rehetra dia azony avy amin'ny fiainana sy ny fahafatesan'i Kristy, ary koa hekeny fa Andriamanitra no Tompon'izy ireo.
Nanoratra ny apostoly hoe: "tsy tompon'ny tenanareo hianareo". Na dia toa ambany fifehezan'ny tompo lozabe aza isika, na dia nanapaka ny fisainantsika aza ilay mpanjakan'ny fahamaizinana, dia efa nividy antsika i Kristy Jesosy Tompo, nandoa ny onitra tamin'ny alalan'ny Rany ho antsika (...,) Manompoa Azy amin'ny fo feno fahavononana, ary aza mandroba ny fananan'Andriamanitra intsony. "Fa fahafatesana no tambin'ny ota, ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika". (...)
Amin'ny alalan'ny Teniny Masina, amin'ny alalan'ny fitantanany, ary amin'ny alalan'ny hafatra maro alefany arninao amin'ny alalan'ny mpanompony, dia milaza aminao isan'andro i Jesosy manao hoe: "Indro, efa mitsangana en am-baravarana Aho ka mandondana; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy Amiko". Nafoin'i Jesosy ho anao ny ainy sarobidy, mba ho tonga mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra amin'izany ianao, rehefa afa-nandositra ny fahalotoana izay en amin'izao tontolo izao noho ny filana. Ary atolory Azy ny tenanao ho fanomezan-toky fa tia sy mankasitraka Azy ianao. Raha tsy noho ny fitiavana nomena antsika maimaimpoana avy amin'i Kristy, dia ho kivy tanteraka isika ankehitriny, haizina mikitroka ara-panahy no hisy antsika. Misaora an'Andriamanitra isan'andro nanome antsika an'i Jesosy. -VI, 26 Aprily 1894.
Ny fieritreretana fotsiny fa maty ii Kristy mba hahazoantsika ilay fanomezan'ny fiainana mandrakizay dia tokony ho ampy hampipololotra avy ao am-pontsika ao ny fankasitrahana vokatry ny fo marina, ary koa hampipololotra avy eo imolotsika ny fiderana Azy amin-kafanam-po indrindra. - RH, 20 Septambra 1881.